Nagu Soo Biir | GIGALIGHT
Kormeeraha sare ee qalabka koritaanka elektaroonigga ah ee qalabka elektiroonigga ah
Wuhan / Shenzhen Master-ka
1. Shahaado Master ama ka sareysa xagga isgaarsiinta indhaha, in ka badan 8 sano oo waayo-aragnimo guud ahaaneed ah naqshadda naqshadeynta moodooyinka xawaaraha sare;
2. Khibrad horumarineed oo guul leh oo ku saabsan gudbinta indhaha ee ka sarreysa 100G, oo ku fiican qaabeynta qalabka iyo qaababka cabbirka;
3. Yaqaanaan habka modulation modulation-xawaaraha sare, mabda'a iyo DSP;
4. Leh tababar koox farsamo iyo khibrad maareyn abaabul;
5. Awoodda xallinta dhibaatada farsamo ee wanaagsan;
6. Maareynta ururada wanaagsan iyo xirfadaha wada xiriirka.
1. Hoggaamiya kooxda farsamada si ay u dhammaystiraan howlaha horumarineed ee 100G, 200G, 400G isku xirka isku-xirka indhaha;
2. Daraasad hordhac ah oo ku saabsan xawaaraha sare ee xawaaraha sare ee teknoolajiyada cusub ee shabakadaha aagagga magaalooyinka iyo codsiyada isgaarsiinta 5G;
3. Xulashada aaladda iyo naqshada naqshadaha naqshadaha transceivers optical, horumarinta mashruuca;
4. Horumarinta madal imtixaanka loogu talagalay modules-yada indhaha iyo geedi socodka oo dhan laga bilaabo imtixaanka illaa waxsoosaarka guud;
5. Tababarka awoodda farsamada ee kooxda R & D;
6. Xalinta dhibaatada farsamo ee macaamiisha iyo taageerada.
Shuruudaha Shaqada: 1. Shahaado Master ama ka sareysa xagga isgaarsiinta indhaha, in ka badan 8 sano oo khibrad ah ...
Injineer Qalabka Korontada ee EDFA
1. Shahaadada Bachelor ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga xiriirka indhaha, 5 sano oo waayo-aragnimo shaqo ah oo ku saabsan jagooyinka la xiriira EDFA;
2. Yaqaaniin moodada indhaha ee loo yaqaan 'EDFA optical module', naqshadeynta qalabka kumbuyuutarrada qalabka indhaha iyo naqshadaynta muuqaalka indhaha, yaqaanaa habka waxsoosaarka ee alaabada isgaarsiinta indhaha iyo adeegsiga qalabka tijaabada;
3. Waa in aad leedahay waayo-aragnimo mashruuc oo guul leh oo ku saabsan moduleka indhaha ee EDFA;
4. Sifeeyaha isgaarsiinta indhaha ee caan ka ah iyo tusaha waxqabadka qaybaha, habka wax soo saarka;
5. Iyada oo la saadaalin karo awooda-saadaalinta gacanta, waxay si madaxbanaan u fulin kartaa dhismaha iyo dhiska aaladda tijaabada sheyga.
1. Mas’uul ka ah qaabeynta wadada indhaha ee transceivers-ka loo yaqaan EDFA, amplifier fiber-fiped iyo shabakadaha wadooyinka kala duwan ee indhaha. Xullo qaybaha naqshada dariiqa indhaha, qaab dhismeedka, wareegyada, shuruudaha softiweerka, qaabab kale, wareegyada, xalalka la xiriira softiweer, xulashada qalabka, iyo tijaabada muunad;
2.Isugu habeynta hirgelinta mashruuca heerarkiisa kala duwan ee cilmi baarista iyo horumarka, oo ay kujirto bilowga mashruuca ilaa qiimeynta sheyga ugu dambeeya ee sheyga uu buuxiyo shuruudaha beddelka;
3. Wuxuu mas'uul ka yahay dabagalka iyo xallinta dhibaatada inta lagu guda jiro marxaladda R&D iyo wajiga soosaarka tijaabada;
4. Masuul ka ah gudbinta muunad macaamil iyo xalinta dhibaatada alaabada transceiver indhaha;
5. Waxay mas'uul ka tahay qaabeynta soosaarka waxsoosaarka waxayna hubisaa in gudbiyayaashu leeyihiin awooda ganacsi.
Shuruudaha Shaqada: 1. Shahaado jaamacadeed ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga wada-xiriirka indhaha, 5 sano oo shaqeyn ...
Sipervisor Development EDFA
1. Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga isgaarsiinta indhaha ama majors kale oo xiriir la leh, 5 sano oo waayo-aragnimo shaqo ah oo ku saabsan jagooyinka la xiriira EDFA;
2. Yaqaanaan qalabka gudbinta indhaha ee EDFA, qorshaha naqshadeynta qalabka kumbuyuutarrada indhaha iyo qaabeynta muuqaalka indhaha, yaqaanaa habka waxsoosaarka ee alaabada isgaarsiinta indhaha iyo isticmaalka qalabka tijaabada;
3. Waa in aad leedahay waayo-aragnimo mashruuc oo guul leh oo ku saabsan transceiverseyeyaasha indhaha ee EDFA;
4. Yaqaana tilmaamayaasha waxqabadka iyo geedi socodka wax soo saarka ee isgaarsiinta indhaha ee firfircoon iyo waxyaabaha ka kooban;
5. Waxay leedahay awood gacan-qabasho xoog leh, oo si madaxbanaan u dhisi karta oo baabi'in karto aagaga tijaabada sheyga.
2. Abaabulka iyo hirgelinta marxaladaha kala duwan ee cilmi baarista iyo horumarka mashruuca, oo ay kujiraan bilowga mashruuca ilaa qiimeynta sheyga ugu dambeeya ee sheyga uu buuxiyo shuruudaha beddelka;
4. Masuul ka ah soo gudbinta saamballada macaamiisha iyo xallinta dhibaatada alaabooyinka gudbinta indhaha;
5. Mas’uul ka ah qaabeynta soosaarka waxsoosaarka, iyo in la hubiyo in soo gudbintu awood u leeyihiin inay ku ganacsato.
Shuruudaha Shaqada: 1. Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga wada xiriirka indhaha ama wixii kaloo la xiriira ...
Injineerka Horumarinta Sooftiweerka Isuduwaha Isuduwaha
1 、 shahaado jaamacadeed ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga Isgaarsiinta, injineernimada macluumaadka elektiroonigga ah, otomatiga, kombiyuuterka ama waxyaabaha kale ee la xiriira;
2.Skilled in C / C ++. VB, VC oo loogu talagalay horumarinta barnaamijyada sare ee barnaamijyada sare, oo leh awood ay si madaxbanaan u horumariso una xalliso dhibaatooyinka farsamo, 2 sano oo waayo-aragnimo shaqo ah;
3.Haree xirfadaha nidaamka isku-xidhan ee Linux, oo aad u yaqaanna barnaamijyada MAC chip;
2 sense dareen sare oo masuuliyad leh ， sifiican, ， Awoodda falanqaynta good kalsooni weyn kooxeed.
1. Masuul ka ah qaabeynta iyo kobcinta kombiyuutarka kombiyuutarka ee kombuyuutarrada loogu talagalay alaabada gudbinta indhaha;
2. Masuul ka ah qaabeynta iyo kobcinta kumbuyuutarrada caqliga leh ee kombiyuutarka casriga ah ee kombiyuutarka (PC);
3. La shaqee qofka mas'uulka ka ah mashruuca si uu u dhammaystiro qaabeynta iyo dib u eegista qorshaha;
4. Wuxuu mas'uul ka yahay diyaarinta iyo dib u eegista dukumiintiyada mashruuca mashruuca laxiriira.
Shuruudaha Shaqada: 1 shahaadada koowaad ee jaamacadda ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga Wada-xiriirka, macluumaadka elektiroonigga ah ...
Coherent Optical transceiver Hardware Development Injineer
1. Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya, inka badan 5 sano oo ah xawaare sare ama 5G nidaamka gudbinta isgaarsiinta taleefanka gacanta, qalabka, qalabka indhaha, qaab dhismeedka iyo howsha iyo khibradaha kale ee hodanka ah ee jihooyinka kala duwan;
2. In ka badan 3 sano oo ah CFP / CFP2 coherent optical transceiver moduyutarka qalabka qaabeynta wareega iyo khibradda horumarka. Si guul leh u abaabushay wareegga wareega indhaha ee 100G;
3. Aqoon u leeyahay jawiga dalabaadka ee gudbiyaha indhaha, aqoon u leh borotokoollada la xiriira, iyo yaqaan cilmiga isgaarsiinta indhaha;
4. Xirfad u leh naqshadaynta dalabka iyo dib-u-dhigga ee analogga iyo wareegyada dhijitaalka ah;
5. Xirfad leh qaabeynta wareega xawaaraha sare, aragtida gudbinta mowjadda mowjadaha iyo jilidda, iyo awooda falanqaynta wareegga adag;
6. -Qaar-bartay, Iyada oo la adeegsanayo falanqaynta iyo karti u helida xallinta dhibaatada, waxay la kulmi kartaa caqabadaha cilmi baarista teknolojiyada cusub iyo horumarka.
1. Kaqeyb gal guud ahaan naqshadda naqshadeynta iyo qaabeynta wareegga gaarka ah ee qalabka iyo tijaabada transceivers indhaha ee 100G;
2. Masuul ka ah qaabeynta naqshadeeyayaasha iftiinka indhaha, xulashada aaladda, qaabeynta qaab dhismeedka, iyo dhameystirka qaabeynta PCB iyo dib-u-dhigga;
3. Caawinta dib-u-eegista qaabeynta naqshadda PCB iyo jilitaanka dhammaan mashaariicda, iyo ka caawinta dhammaystirka naqshad farsamo iyo xallinta dhibaatada;
4. Masuul ka ah dabagalka iyo xalinta dhibaatooyinka soosaarka alaabada iyo marxaladaha soosaarka tijaabada;
5. Wuxuu mas'uul ka yahay soo gudbinta muunadda macaamiisha iyo xallinta dhibaatada alaabada gudbinta indhaha;
6. Masuul ka ah qaabeynta waxsoosaarka soosaarka si loo hubiyo in soo gudbiyayaashu leeyihiin awoodo wax soo saar.
Shuruudaha Shaqada: 1. Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya, inka badan 5 sano oo ah xawaare sare ama 5G mobi ...
Isku-duwaha Kobcinta Tooska ah ee Isku-Xirka Indhaha
1 degree Darajada Masterka ama wixii ka sareeya; ugu weyn ee indhaha, optoelectronics.solid aqoon xirfadeed iyo xirfado, waayo-aragnimo warshadeed ayaa la door bidaa;
2 、 In ka badan saddex sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan nashqadeynta qalabka modules-yada isku-dhafan (CFP / CFP2), oo garanaya mabaadi'da, naqshadaha, heerarka, borotokoollada iyo qorshayaasha tijaabinta transceivers optical isku-darka;
3 Xirfadaha wada-xiriirka iyo xirfadaha hoggaaminta.
1 age Kaqeyb gal guud ahaan dib u eegista naqshadeynta naqshadaha 100G isku xirnaanta indhaha, naqshadeynta qalabka qaaska, tijaabada, iwm.;
2 、 Masuul ka ah qaabeynta moodeelka muuqaalka indhaha ah, xulashada aaladda, qaabeynta naqshada, naqshadeynta PCB iyo dejinta;
3 、 Caawinta dib-u-eegista qaabeynta naqshada PCB iyo jilitaanka dhammaan mashaariicda, iyo ka caawinta dhammaystirka naqshad farsamo iyo xallinta dhibaatada;
4 、 Mas、uul ka ah dabagalka iyo xallinta dhibaatooyinka soosaarka alaabada iyo marxaladaha soosaarka tijaabada;
5 、 Masuul ka ah soo gudbinta muunad macaamil iyo xalinta dhibaatada ee gudbinta indhaha;
6 、 Masuul ka ah qaabeynta soosaarka waxsoosaarka, iyo in la hubiyo in gudbiyayaashu leeyihiin awoodo wax soo saar;
7. Waxay mas'uul ka tahay hagida xallinta mashaakilaadka farsamo iyo hubinta horumarka kooxaha mashruuca la xiriira;
8. Xiriirka farsamada ee macaamiisha iyo ka qeybgalka shirarka farsamada ee la xiriira.
Shuruudaha Shaqada: 1 degree Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya; ugu weyn ee indhaha, xirfadda optoelectronics.solid ...
Agaasimaha Farsamada Kobcinta Qalabka Indhaha
1. Shahaado Master ama ka sareysa, 10 sano oo waayo aragnimo shaqo ah;
2. Khibrad hodan ku ah teknolojiyada injineernimada iyo hababka cilmi baarista ee qalabka firfircoon ee indhaha iyo aaladaha shucaaca leh, oo ku takhasusay aragtiyaha aasaasiga ah ee optoelectronics iyo optoelectronics;
3. Yaqaaniin aadaabta edbinta ee aaladaha optoelectronic-ka iyo xawaaraha xawaaraha sare ee optoelectronic qalab baakadaha, qalabka, heerarka imtixaanka iyo aaladaha tijaabada, oo leh waayo-aragnimo hodan ku ah cilmi baarista iyo horumarinta isbeddelka alaabada cusub;
4. Hesho dabeecad shaqo oo wanaagsan oo Awoodi karta inaad ku shaqeysid adigoo ku hoos jira cadaadis sarreeya iyo waqti xaddidan.
1. Masuul ka ah hormarinta iyo maareynta aaladda xawaaraha sare leh ee shirkadda;
2. Mas'uulka ka ah shirkadda qalabka 100G / 200G / 400G naqshada indhaha iyo baakadaha;
3. Masuul ka ah gebi ahaanba geedi socodka aaladda laga bilaabo horumarka ilaa wax soo saarka;
4. Masuul ka ah dhismaha khadka waxsoosaarka iyo xallinta dhibaatada farsamada iyo falanqaynta aaladda;
5. Mas’uul ka ah baarista teknolojiyada daraasaadka sare ee qalabka indhaha.
Shuruudaha Shaqada: 1. Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya, waayo-aragnimo shaqo 10 sano ah; 2. Khibrad hodan ah ...
Injineer ka mid ah Geedi socodka Horumarinta Qalabka
1. Shahaadada Bachelor ama wixii ka sareeya, Cilmiga indhaha ama optoelectronics, aqoonta xirfadeed ee adag iyo xirfadaha, khibradaha warshadaha la xiriira ayaa la door bidaa;
2. In ka badan shan sano oo waayo aragnimo shaqo ah; 10G / 25G / 100G APDROSA / .TOSA waayo-aragnimada baakadaha qalabka ayaa la door bidaa;
3. Aqoon u leh tikniyoolajiyada baakadaha aaladda, sida eutectic, xabagta qalinka, geedi socodka Die / Wire Bonding, alxamida leysarka, alxamida iska caabbinta, koollada, iskudhiska iyo habab kale, oo yaqaan cilmiga tikniyoolajiyada chip chip chip qalab la door bidaa;
4. Yaqaana waxqabadka, hababka tijaabada iyo shuruudaha lagu kalsoonaan karo ee alaabada aaladda;
5. Waan garanayaa mabaadi'da shaqada ee LD / PD iyo jajabyada wadaha la xiriira, iyo fahamka mabda'a dalabka ee transceivers optical side;
6. Si madaxbanaan u xallin kara dhibaatooyinka hawsha qalabka, waxay wanaajin kartaa geedi socodka waxayna leedahay awood ay ku diyaariso feylasha geedi socodka;
7. Hayso wanaag English xirfadaha aqrinta iyo xirfadaha wada xiriirka;
8. Hayso karti wanaagsan oo wada shaqeynta kooxda iyo dareen xoogan oo sharafeed kooxda ah, leh dareen sare oo mas'uuliyad iyo lahaansho.
1. Ka bilow mashruuca sameynta xawaare sarreeya oo la mid ah aaladaha isku dhafan ee indhaha iyo aaladaha indhaha, ka qeybqaata qaabeynta indhaha, qaabeynta geedi socodka, iyo qaabeynta farsamada si loo hubiyo soosaarka iyo caqliga naqshadeynta badeecada, oo si habsami leh ugu xirmaan soo bandhigista tusmooyinka badeecada wax soo saar ballaaran;
2. Mas'uulka ka ah masraxa horumarinta geeddi-socodka iyo hannaanka hawlgalka ee aaladaha coaxial dhaqameed iyo makiinado nal xawaare sare leh oo isku dhafan, oo la beddelo geeddi-socodkii hore;
3. Masuul ka ah hagida hagida wax soosaarka iyo tababarka hanaanka waxyaabaha la badalay;
4. Masuul ka ah xaqiijinta iyo qiimeynta aaladaha muhiimka ah ee aaladda, qiimeynta isku halaynta geedi socodka, iyadoo la raacayo shuruudaha nidaamka, taageerida horumarinta iyo qaabeynta sheyga aaladda, iyo dhameystirka diyaarinta DEFMA.
Shuruudaha Shaqada: 1. Shahaadada bajlarka ama wixii ka sareeya, Cilmiga indhaha ama optoelectronics, xirfad adag ...
Injineer Software Firmware
1 degree Shahaado jaamacadeed ama wixii ka sareeya elektironikada, isgaarsiinta, optoelectronics ama waxyaabo kale oo la xiriira;
2、2 sano oo waayo-aragnimada horumarinta qalabka firmware ee MCU;
3 icient ku yaqaan C / C ++, oo caan ku ah borotokoolka isgaarsiinta sida 'interface interface' SPI, I2C, MDIO, RS232 iyo USB iwm;
4 、 Aqoon u leh qalabka mashiinka qalabka MCU ee ku saleysan C8051 iyo naqshada ARM, ugu yaraan hal MCU (STM32 / Silicon Labs / ADI / Cypress, iwm.);
5 command Taliska wanaagsan ee Keil ama IAR taxanaha IDE compiler;
6 、 Aqoon u leh borotokoolka shaqeynaya ee dhakhaatiirta indhaha ayaa la door bidaa, sida SFF-8472, SFF-8663, CFP MSA;
7 、 Hayso qoraal gaar ah oo GUI ah (VC MFC programming programing) awooda kombiyuutarka;
8 ability awooda xoogan ee wax akhriga iyo waxgarashada English dukumiintiyada;
9 sense dareen sare oo masuuliyad leh ， sifiican, ， Awoodda falanqaynta good kalsooni weyn kooxeed.
1 design Qaabeynta softiweerka kumbuyuutarrada iyo horumarinta alaabada gudbinta indhaha iyo xallinta arrimaha farsamada la xiriira;
2 、 Horumarinta, dayactirka iyo kobcinta softiweerka Firmware-ga la xiriira ee qalabka tijaabada indhaha lagu gudbiyo;
3 、 Wadashaqayn la sameyso injineerinka qalabka si aad u dhameystirto naqshadeynta iyo dib u eegista;
、 Wadashaqayn la samee Injineerada imtixaanka si loo dhammeeyo ku-soo-boodka kombiyuutarka;
5 Ballanqaado tayada firmware-ka iyada oo loo marayo horumar joogto ah iyo kobcinta;
6 、 Masuul ka ah diyaarinta iyo dib u eegista dokumentiyada mashruuca mashruuca laxiriira.
Shuruudaha Shaqada: 1 degree Shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama ka sare ee elektiroonigga, isgaarsiinta, optoelectronics ama o ...
Injineer sarsare oo transceivers optical iyo Hardware ah
1 degree Shahaado Master ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga xiriirka elektaroonigga ah ama injineerinka optoelectronic, in ka badan 2 sano oo waayo-aragnimo ah xagga naqshadeynta iyo horumarka. Oggolow injineer sareeya (wixii ka sareeya khibrad 5 sano ah);
2, dhakhso u bartay, oo loo go'aamiyay horumarinta muddada-dheer ee warshadaha optoelectronic-ka.
1 、 Ugu badnaan ku hawlan qaabeynta wareegga iyo qaabeynta qalabka korantada xawaaraha sare ku socda (100G / 200G / 400G);
2 selection Xulashada qalabka iyo nashqadeynta naqshadeeyaha horumarka gudbinta, horumarinta mashruuca iyo maareynta;
3 development Horumarinta masraxa gudbinta iyo geedi socodka oo dhan laga bilaabo imtixaanka illaa waxsoosaarka guud;
、 Xallil oo taageer dhibaatooyinka farsamo ee macaamiisha.
Shuruudaha Shaqada: 1 degree Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga xiriirka elektaroonigga ama optoelectronic ...
1 degree Heerka Master ama ka sareeya, ugu weyn injineerinka optoelectronic, oo sifiican ugu hadlaa English, leh aragti guud;
2 、 In ka badan 8 sano oo waayo-aragnimo ah warshadaha isgaarsiinta indhaha, khibrad suuq geyn caalami ah, iyo ilaha warshadaha qaarkood;
3 manager maamulaha iibka iyo waaya aragnimada maareeyaha maamulka iibka ee u dhigma, kuna wanaagsan maaraynta xiriirka macaamiisha;
4 skills Xirfadaha iibka ee ikhtiyaarka ah iyo xirfadaha wada-xiriirka wanaagsan, oo leh karti dhowr jeer ah safarro ganacsi oo dibedda ah;
5 、 Daacadnimo iyo aaminaad, Go'aan adag oo lagu guuleysto laguna adkeysan karo culeyska himilooyinka shaqada.
1 、 abaabulaan sameynta istiraatiijiyadaha iibka suuqyada gaarka ah iyo qorshayaasha hadafka ah iyadoo la raacayo istiraatiijiyadda iibka guud ee shirkadda;
2 、 Qorsheeyo howlaha guud ee nidaamka iibka shirkadda isla markaana sameystaan ​​oo horumariyaan xeerar iyo qawaaniin kala duwan;
3, kormeeraa hirgelinta geedi socodka iibka iyo dhameystirka howlaha iibka iyadoo la raacayo qorshaha iibka sanadlaha ah ee shirkadda;
Masuul ka ah qorshaynta guud, dejinta iyo u qoondaynta ilaha mashaariicda iibka;
5 、 Masuul ka ah maareynta iyo dhismaha kooxda iibinta, tababarka iyo hagida shaqaalaha iibka;
6 Kaqeybgal qorshaynta suuqa, maareynta badeecada, iwm.
Shuruudaha Shaqada: 1 degree Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya, ugu weyn injineerinka optoelectronic, sifiican u yaqaan spok ...
Madaxweyne ku-xigeenka ee Sales
Shuruudaha Shaqada ：
5 、 Daacadnimo iyo aaminaad, Go'aan adag oo lagu guuleysto, iyo kartida looga hortagi karo cadaadiska himilooyinka shaqada.
5, Mas、ul ka ah maamulka iyo dhismaha kooxda iibinta, tababarka iyo hagida shaqaalaha iibka ；
Shuruuda Shaqada ： 1 degree Shahaadada Masterka ama wixii ka sareeya, ugu weyn injineernimada optoelectronic, ku wanaagsan qeybaha ...
Maamulaha Iibka verse Dibadba）
1. Shahaadada Bachelor ama wixii ka sareeya, ku fiican gudaha English dhageysiga, hadalka, akhrinta iyo qorista, wada xiriirka indhaha ama waxyaabaha kale ee la xiriira ayaa la door bidaa;
2 In ka badan 2 sano oo waayo-aragnimo iib ah oo leh koonto muhiim ah oo u dhexeeya 25 iyo 38 ， Khibrad iibsi ee warshadaha isgaarsiinta indhaha ayaa la door bidaa; qalin jabiyaasha cusub ee jaamacadda ka qalin jabiya waa la aqbali karaa;
3 skills Xirfadaha gorgortanka ee adag iyo xirfadaha wada xiriirka, iyo awooda lagu hormarinayo macaamiisha dibada si madax banaan;
4 tempe dabeecad wanaagsan, dabeecad wanaagsan, fikir deg deg ah;
5 、 Daacadnimo iyo aaminaad, xirfadle sare oo karti u leh inuu iska caabiyo culeyska himilooyinka shaqada.
6 、 la qabato safarada ganacsiga ee dibada;
7 manage Maamulayaasha iibka dibadaha ka baxsan si wanaagsan ayaa loola dhaqmayaa.
1 、 Masuul ka ah horumarinta suuqyada dibada, dayactirka macaamiisha iyo gorgortanka ganacsiga ee gobolka Asia Pacific;
2 、 Masuul ka ah howsha amar bixinta, macluumaadka muunad iyo soo dhoweynta muunadda;
3 management maaraynta xiriirka macaamiisha oo dib u soo celinta lacag bixinta;
4 、 Massibleuul ka ah falanqaynta suuqa oo ka qaybgal bandhigyada;
5 、 aruurinta macluumaadka suuqa ee tartamayaasha iyo qabashada isbeddelada suuqyada;
6 、 Baadhitaan iyo wanaajinta qanacsanaanta macaamiisha, maaraynta cabashada macaamiisha;
7 、 Amro dib-u-eegis, kaqeyb gal dib u eegista nidaamka, hirgalinta yoolalka istiraatiijiyadeed, iyo mas'uuliyadda hagida iyo kormeerka kormeerka macaamiisha.
Shuruudaha Shaqada ： 1. Shahaadada koowaad ama ka sare, aad ugu wanaagsan gudaha English dhageysiga, hadalka, akhriska ...
Maamulaha Iibka Gobolka （Aasiya & Baasifigga
2. In ka badan shan sano oo waayo-aragnimo shaqo ah oo khibrad shaqo ah oo ku saabsan Yurub, Mareykanka ama Aasiya macaamiisha waaweyn, khibradda iibka dibedda ee alaabada isgaarsiinta indhaha ayaa la door bidaa;
3. Xirfadaha gorgortanka adag iyo xirfadaha isgaarsiinta, iyo awooda lagu hormarinayo macaamiisha dibada si madax banaan;
4, dabacsanaanta muuqaalka wanaagsan, dabeecad wanaagsan, fikir deg deg ah;
5. Daacadnimo iyo aaminaad, xirfadle sare iyo karti u leh inuu iska caabiyo culeyska himilooyinka shaqada;
6. Goobta Shaqada: Dhaladka Hong Kong, Dhaladka Hong Kong.
1 、 Masuul ka ah horumarinta suuqa, dayactirka macaamiisha iyo gorgortanka ganacsiga ee gobolka Asia Pacific;
4 、 Massibleuul ka ah falanqaynta suuqa Aasiya-Pacific oo ka qaybgal bandhigyada;
Agaasimaha Iibka (Shiinaha)
1. Shahaado jaamacadeed ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga xiriirka elektaroonigga ah ama asalka la xiriira;
2. In ka badan 5 sano oo waayo-aragnimo iib ah ee iibiyaasha qalabka guryaha / suuqyada xogta suuqyada warshadaha isgaarsiinta;
3. Suuqgeyn heer sare ah iyo xirfadaha horumarinta macaamiisha;
4. Xirfad-yaqaan wanaagsan iyo anshax-xirfadeed;
5. Aqbal safarada ganacsi ee aadka udhaxeeya.
1. Ballaarinta iyo horumarinta ganacsiga iibiyaasha qalabka guryaha iyo suuqyada xarumaha xogta;
2. Masuul ka ah maareynta xiriirka macaamiisha muhiimka ah ee guriga (iibiyayaal qalabka, xarumaha xogta iyo hawl wadeenada);
3. Masuul ka ah maareynta suuqgeynta kooxda iibinta;
4. Kaqaybgal qorshaha maaraynta sanadka ee shirkadda;
5. Masuul ka ah maareynta waxqabadka kooxaha gudaha.
Shuruudaha Shaqada ： 1. Shahaado jaamacadeed ama wixii ka sareeya, ugu weyn xagga xiriirka elektaroonigga ah ama dib u eegis la xiriira ...